Malawi Waxay Waydisay Feeryahankii Hore Mike Tyson Inuu Noqdo Safiirka Xashiishada • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Malawi waxay waydiisatay feeryahankii hore Mike Tyson inuu noqdo safiirka xashiishadda
cannabisWararkaWargeysyada caalamiga ah ee cannabisSharci dejinta & Sharci dejinta
Malawi waxay waydiisatay feeryahankii hore Mike Tyson inuu noqdo safiirka xashiishadda
albaabka Ties Inc. November 28 2021
maqaal by Ties Inc. November 28 2021
Feeryahankii hore waxa uu Maraykanka ku hayaa ganacsi xashiishad ah oo malaayiin dollar ku kacaya. Malawi ayaa ka codsatay xiddiga feerka Mike Tyson inuu noqdo safiirka rasmiga ah ee dalagga xashiishadda.
Xoghayaha Beeraha Lobin Low ayaa warqad u dirtay Tyson oo ay ku casuuntay inuu qabto doorka, isagoo sheegay in sharciyeynta Malawi ay abuurtay fursado cusub. Horyaalkii hore ee miisaanka culus adduunka, Tyson waa ganacsade wuxuuna maalgashaday beer xashiishad ah oo ku taal Maraykanka.
Ururka xashiishada ee Mareykanka ayaa fududeeyay heshiiska Tyson, Waaxda Beeraha ayaa tiri. Madaxa laanta Malawi, Wezi Ngalamila, ayaa BBC-da u sheegay in feeryahankii hore uu aqbalay martiqaadka, uuna jiro qorshe uu ku booqanayo dalkaas. "Tyson way nala shaqayn doontaa," ayay tidhi. Malawi waxay sharciyeysay beerista iyo habaynta cannabis isticmaalka daawada, laakiin joojisay sharciyeynta isticmaalka shakhsi ahaaneed.
Xashiishada caafimaadka iyo hemp warshadaha
Wasaaradda Beeraha ee dalka ayaa ku dhiirigelisay beeralayda inay beeraan xashiishadda si ay dawooyin u helaan iyo hemp-ka loo isticmaalo warshadaha. Dawladdu waxay rajaynaysaa in taageerada Tyson "ay soo jiidato maalgashadayaasha iyo xitaa kuwa wax iibsan kara," afhayeenka wasaaradda Gracian Lungu ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Noocyada xashiishadda ee gudaha laga beero – dahab Malawi – ayaa loo yaqaan isticmaalayaasha madadaalada ee adduunka oo dhan.
Sida laga soo xigtay Tyson, sigaar cabista xashiishadda ayaa wanaajisay caafimaadkiisa maskaxeed oo bedelay noloshiisa. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baadhisyada qaar ayaa soo jeediyay in xashiishadda awoodda leh ee sigaar cabbintu ay kordhin karto khatarta cudurrada dhimirka ee halista ah. Xarunta la xisaabtanka dadweynaha, oo ah koox bulshada rayidka ah ee Malawi, ayaa dhaleecaysay tallaabada safiirnimada ee dembiyadii hore ee Tyson.
Feeryahankii hore ayaa xabsiga la dhigay 1992-kii kadib markii lagu helay dambi kufsi ah oo ka dhacay Indiana. Waxa la sii daayey 1995 ka dib markii uu dhamaystay wax ka yar saddex sano oo xadhig ah. "CPA ma fahansana sababta Malawi ay u rabto dembiilaha kufsiga lagu xukumay oo ah danjire calaamad ah."
Akhri wax dheeraad ah bbc.com (hum, EN)
Tijaabada lagu qiimeeyo daawada xashiishadda ee burooyinka maskaxda si ay u sii socoto
Zamnesia 2.0 ayaa imaaneysa!
Taxanaha daawada caanka ah ee Narcos wuxuu helayaa ciyaarta fiidiyowga
Codsiga wuxuu ku baaqayaa ceymiska xashiishadda cannabis ee…